July 2019 - POPPIN NEW
မြန်မာ ပြည်သူ အားလုးံအတွက် အရေးကြီးသတင်း
Pop Pin New July 3, 2019
2 –7– 2019 ***မြန်မာ ပြည်သူ အားလုးံအတွက် အရေးကြီးသတင်း*** အရေးကြီးသတင်း !! Red Alert Warning !!အများသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ။ သတိထားကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ အစိုးရအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ အခု အခြေအနေဟာ ရာသီတုပ်ကွေး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ …
အသည်းကွဲလို့ LIVE လွှင့် ငိုယိုပြီး၊ SHAMPOO တွေသောက်ပြတဲ့ ကောင်မလေး၊ နာမည်ကြီးနေ(ရုပ်သံ)
အသည်းကွဲလို့ LIVE လွှင့် ငိုယိုပြီး၊ SHAMPOO တွေသောက်ပြတဲ့ ကောင်မလေး၊ နာမည်ကြီးနေ မလေးရှားနိုင်ငံကလို့ ယူဆရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ကောင်လေးက ထားသွားတာကို အကြောင်းပြုပြီး Live လွှင့်ကာ ငိုယိုခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနောက် ကောင်မလေးဟာ ခေါင်းလျှော်ရှည်တွေကို ဖျော်ရည်အလား စိတ်မှာထားပြီး၊ အားရပါးရ သောက်ပြတာပါ။ ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ မသိရပါဘူး။ ဒီဗွီဒိယိုကို Viralkan Ajer …
အပြစ်အတွက်၊ သမီးလေးကို မီးကျီးခဲတွေပေါ်မှာ ဒူးထောက်ခိုင်းပြီး ဒဏ်ပေးတဲ့မိခင်
အပြစ်အတွက်၊ သမီးလေးကို မီးကျီးခဲတွေပေါ်မှာ ဒူးထောက်ခိုင်းပြီး ဒဏ်ပေးတဲ့မိခင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ အသက်(၈)နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းမှာ လွယ်အိတ်မေ့ကျန်ခဲ့တာကို အကြောင်းပြုပြီး မိခင်ဖြစ်သူက မညှာမတာ ရက်ရက်စက်စက် ဆုံးမတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကလေးမလေးဟာ ရိုက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေအပြင်-ဒူးမှာလည်း ဆိုးရွားတဲ့ဒဏ်ရာတွေ ရထားလို့ ကျောင်းတောင် မတက်နိုင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ကောင်မလေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် သောကြာနေ့က မိုးတွေအလွန်ရွာလို့ …
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက်အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက်အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ Justice for Victoria ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဖြစ်ပွားခဲတဲ့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Wisdom Hill private မူကြိုကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ အသက်၃နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့သမီးငယ်လေး ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့အမှုကို အမှုမှန်ကိုပေါ်ပေါက်အောင် တရားမျှတစွာစစ်ဆေးပေးကြဖို့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေဟာ change.org ကနေတစ်ဆင့် လက်မှတ်ထိုးပြီးတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီအမှုဟာ အခုအချိန်အထိ တစ်လကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီး အမှုကိုလွှဲပြောင်းရယူထားပေမယ့် …
ခြေနှစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားလို့ ခင်ပွန်းသည်က စွန့်ပစ်သွားပေမဲ့ အကဆရာမအလုပ်နဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ကောင်မလေး
ခြေနှစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားလို့ ခင်ပွန်းသည်က စွန့်ပစ်သွားပေမဲ့ အကဆရာမအလုပ်နဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ကောင်မလေး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ် မေလပိုင်းတုန်းက တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းမှာ ငလျင်အကြီးအကျယ်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးသူ အများအပြားနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ အများအပြား ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဟောင်ကောင်မင်းသမီးချော Cecilia Cheung နဲ့ ရုပ်ချင်းအရမ်းတူလွန်းတဲ့ Liao Zhi ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေးလဲ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ …
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသူများတွင် တွေ့ရသော ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ (၇)မျိူး
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသူ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းတွင် တွေ့ရတဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ (၇) မျိူး (၁) အလုံးအကျိတ်များ သို့မဟုတ် အနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း- အရေပြားနဲ့ ရင်သားကင်ဆာများမှာ တွေ့ရပါတယ် -ရင်သားနဲ့ချိူင်းအောက်တွင် မာကျောသောအဖုများ စမ်းမိခြင်း -အရေပြားတွင် အကွက်များဖြစ်ပေါ်ခြင်း -အလုံးအကျိတ်တစ်ခုရဲ့ အလည်တည့်တည့်တွင် အနာစိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း -မွေးရာပါအမှတ်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် (သို့)အရွယ်ပြောင်းလဲခြင်း (၂) အရေပြားယားယံခြင်း …
ဆရာဝန်တစ်ဦးပြောပြလာတဲ့ မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အသက် ၉ နှစ်သမီးလေးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု…..
လာပြန်ပြီ ဒီနေ့လည်း ရဲနဲ့သမီးကလေး နဲ့ဆေးရုံကို တရားသူကြီးခွင့်ပြုချက်နဲ့ FIR ကိုကြည့်လိုက်တော့ ၁.၇.၁၉ ညနေမှာပျောက်သွားတဲ့ကလေးမလေး အသက်က၉နှစ်တဲ့။Facebookမှာတောင်တက်နေတာတဲ့ ကိုယ်တောင်မသိဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်တို့မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ သူ့အမေဆီကနေ Consent ယူပြီးတော့ စစ်ရတော့တာပေါ့ ဆရာကြီးက ကလေးကိုမေးကြည့်တော့ သူတို့အမေဆိုင်မှာထမင်းလာစားတဲ့ကောင်ကခေါ်သွားတာတဲ့။ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာအမေကြိုခိုင်းတယ်ဆိုပြီးလာခေါ်တာတဲ့။ ပြီးတော့သူ့ကိုညနေမှာ ၂၂လမ်းဘက်ခေါ်ပြီးတော့ ပိတ်ထားတဲ့ထမင်းဆိုင်ထဲမှာ သမီးကို (နားနဲ့မနာဖဝါးနဲ့နာ) ဟိုနမ်းဒီနမ်းလုပ်တယ်တဲ့။ ပါးစပ်ကိုလည်းနမ်းတယ်တဲ့။ ဟိုကိုင်ဒီကိုင်လည်းလုပ်တယ်။ သူ့ဟာကိုလည်းကိုင်ခိုင်းတယ်တဲ့။သမီးကကြောက်လို့မလုပ်ဘူးတဲ့။ …
ဆရာမင်းသုခ ရဲ့ ဇူလိုင်လ အတွက် တစ်လစာဟောကိန်း
ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like&Shareပေးကြပါအုံး …… 2019နှစ်အတွက်မိမိကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းကို ဆရာမင်းသုခထံဖုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီးလိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေ ကံဇာတာအညံ့များလည်းပပြောက်ပြီးကံပွင့် စန်းပွင့် မေတ္တာရေး အချစ်ရေးများ အဆင်ပြေကြပါစေ …။ ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာဆရာမင်းသုခ ၊၇၃လမ်း/၃၄-၃၅လမ်းကြား၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် မန္တလေးမြို့ ….Ph-09440243656 #တနင်္ဂနွေသမီးများ ဒီကာလမှာမိမိအတွက်လုပ်စရာအလုပ်အကြွေးတွေများနေတတ်ပါတယ်။အရင်အပတ်ကမပြီးပြတ်သေး တဲ့ကိစ္စတွေဒီကာလမှာအပြီးသတ်လုပ်နေရတတ်ပါတယ်။ဖခင်ရှိသေးသူများ ဖခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ။ဒီကာလမှာအိုးအိမ်အပြောင်းအလဲမျိုးတွေ ၊အိမ်ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေလဲကြုံနေရတတ်ပါတယ်။အားကိုးမရှာပါနဲ့၊မိမိကိုယ်သာအားကိုးပါ။လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူများကိုမတိုင်ပင်ပါနဲ့ ၊အဖျက်စကားတွေပဲကြားရပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီးရသလောက်နဲ့ရောင့်ရဲလိုက်ပါ …။ အဲလိုသာနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရသင့်တာထက်ပိုရပါလိမ့်မယ်။ဒီကာလမှာကိုယ်ခံအားနည်းနေတာမျိုးတွေလဲ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်ရင် ခြူခြာလွန်းတဲ့နေ့တွေပါပဲ။ရောဂါခံစားရပြီးလို့ထင်တာနဲ့ဆေးခန်းသာသွားပါ။ဆေးမြီးတိုနဲ့မကုပါနဲ့။အချစ်ရေးမှာတော့ချစ်သူကမိမိကိုနားလည်မှုအပြည့်ရှိမဲ့နေ့ရက်တွေပါပဲ။အိမ်ထောင်ရေးမှာညှိနှိုင်းရခက်နေပါတယ်။နားလည်မှုရဖို့အတော့်ကိုကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးမှာ …
မာနတွေကြီးခဲ့ပြီး သေခါနီးအချိန်ကျမှ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဆိုတဲ့ ထိုင်းရုပ်ရှင်မင်းသား(ရုပ်သံ)
လောကကြီးဟာ အင်မတန်တရားကျဖို့ကောင်းပါတယ်။ လူတွေဟာ အောင်မြင်နေချိန်၊ စွမ်းဆောင်နိုင်ချိန်မှာ မာနတွေကြီး၊ လူတစ်ဖက်သားကို အဖက်မတန်သလို ဆက်ဆံခဲ့ပေမယ့် သင်္ခါရသဘောတရားအရ နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ အမှားတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲနောင်တတရားတွေ စက္ကန့်မလပ်ခံစားရင် လူနာကုတင်လေးပေါ်မှာ နောက်ဆုံးအချိန်ကို စောင့်နေရတဲ့ အဖြစ်ပျက်က တစ်ကယ် သနားစရာကောင်းပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တက်သစ်စ ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ဦးဟာ တီဘီ(အဆုတ်နာ) ရောဂါဝေဒနာကို ခံစားရင်း …
အောင်စာရင်းမှာ မပါပဲ အမှတ် တောင်းကြည့်မှ အောင်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်
အောင်စာရင်းမှာ မပါပဲ အမှတ် တောင်းကြည့်မှ အောင်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ် ဂျင်း Post မဟုတ်ဘူး ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အသုံးမကျချက် ကို တရားဝင် ပြောတာ။ နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် (၅၂) မှ ၂ – ၇ – ၂၀၁၉ မှာ ထုတ်ယူ လာတဲ့ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း …